Zimbabwe Communications 2015, CIA World Factbook
Zimbabwe Communications 2015
Zimbabwe Communications 2015, CIA World Factbook
NOTE: The information regarding Zimbabwe on this page is re-published from the 2015 World Fact Book of the United States Central Intelligence Agency. No claims are made regarding the accuracy of Zimbabwe Communications 2015 information contained here. All suggestions for corrections of any errors about Zimbabwe Communications 2015 should be addressed to the CIA.
NOTE: 1) The information regarding Zimbabwe on this page is re-published from the 2015 World Fact Book of the United States Central Intelligence Agency. No claims are made regarding the accuracy of Zimbabwe Communications 2015 information contained here. All suggestions for corrections of any errors about Zimbabwe Communications 2015 should be addressed to the CIA.